Manazava ny antony nanaiky hihaona amin'i Donald Trump | i Tim Cook Vaovao IPhone
Manazava ny antony nanaiky hihaona amin'i Donald Trump i Tim Cook
Herinandro lasa izay, ny Alarobia 14 Desambra, nihaona tao amin'ny Trump Tower any Manhattan ny filoha voafidy Donald Trump niaraka tamin'ny mpitarika teknolojia ambony amerikana, izay maro amin'izy ireo dia efa naneho ny fanoherany ny faty ara-potokevitra an'io tycoon io ny orinasa ankehitriny "mpitarika ny tontolo malalaka."
Anisan'ireo nanatrika ity fivoriana ity ny CEO Alphabet Larry Page, ny CEO Microsoft Satya Nadella, ny CEO CEO Amazon Jeff Bezos, ny Oracle CEO Safra Catz, ny CEO CEO Facebook, Sheryl Sandberg, ny CEO Tesla Elon Musk ary ny CEO Apple Apple Tim Cook. Nahatonga fanehoan-kevitra maro ny fisian'ireto farany, na izany aza Nanazava ny anton'ny nanatrehany i Cook: "Tsy manova zavatra amin'ny alàlan'ny kiakiaka fotsiny ianao".
Tim Cook: Manova zavatra fotsiny ianao «mampiseho amin'ny rehetra ny antony mahatonga ny làlanao no tsara indrindra »
Nandritra ny fihaonana teo amin'i Donald Trump tamin'ny herinandro lasa teo sy ny ankamaroan'ny mpitarika teknolojia amin'izao fotoana izao, lafiny samihafa no noresahina, manomboka amin'ny olana mifandraika amin'ny famoronana asa any Etazonia ka hatramin'ny politikan'ny fanoherana ny fifindra-monina, tsy misy hadino, mazava ho azy, ny olana eo amin'ny toekarena sy ny raharaha ara-bola izay misy fiantraikany mivantana amin'ny ankehitriny sy ny ho avin'ireto orinasa ireto.
Toa, mpiasan'ny Apple maro (ary mpampiasa mpampiasa maro koa) nanontany tena izy ireo raha tena ilaina sy manan-danja tokoa ny fanatrehan'i Tim Cook amin'ity fivoriana ity, raha jerena fa mifanipaka tanteraka ny toerana misy ny roa amin'ny olana toy ny encryption data na fanavaozana ny lalàna momba ny fifindra-monina.
Te hamaly ireo fanontaniana ireo i Tim Cook amin'ny fandefasana a naoty anatiny ho an'ny mpiasan'ny orinasa izay nanondroany, ankoatry ny lafiny hafa, fa "ny governemanta dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahafahantsika manao izay ataontsika", ary ny hany fomba handrosoana amin'ireo olana lehibe dia ny "manolo-tena".
TechCrunch dia nahazo kopian'ity hafatra ity ary nanambara izany ampahibemaso:
FANONTANIANA: Tamin'ny herinandro lasa izy dia niaraka tamin'ny mpitarika teknolojia hafa hihaona amin'ny Filoham-pirenena voafidy Donald Trump. Inona no maha-zava-dehibe ny ifandraisan'ny Apple amin'ny governemanta?
valiana hoe: Tena ilaina izany. Ny governemanta dia afaka mitaona ny fahaizantsika manao izay ataontsika. Afaka mitaona zavatra tsara izy ireo ary mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny zavatra tsy dia tsara. Ny ataontsika dia mifantoka amin'ny politika. Ny sasany amin'ireo sehatra ifantohanay dia ny fiainana manokana sy filaminana, fanabeazana. Izany tokoa ve [ireo faritra manan-danja ireo] miaro zon'olombelona ho an'ny rehetra ary manitatra ny famaritana ny zon'olombelona. Eo amin'ny tontolo iainana izy ireo ary amin'izao fotoana izao dia miady amin'ny fiovan'ny toetr'andro, zavatra ataonay amin'ny orinasa angovo azo havaozina 100 isan-jato.
Ary, mazava ho azy, ny famoronana asa dia ampahany lehibe amin'ny zavatra ataontsika amin'ny alàlan'ny fanomezana fotoana ho an'ny olona tsy amin'ny olona miasa mivantana ho an'i Apple ihany, fa koa amin'ireo olona marobe izay ao anatin'ny tontolo iainantsika. Tena reharehantsika ny namorona asa 2 tapitrisa, amin'ity firenena ity irery. Ny ampahany betsaka amin'izy ireo dia mpamorona rindrambaiko. Izany dia manome ny olon-drehetra hery hivarotra ny asany amin'izao tontolo izao, izay famoronana tsy mampino ho azy.
Manana zavatra hafa mifantoka amin'ny asa bebe kokoa isika, toy ny fanavaozana ny hetra, ary zavatra efa narovantsika hatry ny ela: rafitra tsotra. Ary izahay dia maniry ny hanavao ny IP hanandrana hanakana ny olona tsy hanenjika rehefa tsy manao na inona na inona amin'ny maha orinasa izy ireo.
Betsaka ireo olana ireo ary ny firosoana dia ny firotsahana an-tsehatra. Raha ny tenako manokana dia mbola tsy nahita toerana nahomby aho teo amin'ny sisiny. Ny fomba fitarihanao ireo olana ireo dia ny filalaovana ao amin'ny kianja filalaovana. Noho izany, na eto amin'ity firenena ity, na amin'ny Vondrona eropeana, na any Chine na any Amerika atsimo, dia manolo-tena isika. Ary manao marimaritra iraisana isika rehefa manaiky ary miady hevitra rehefa tsy mifanaraka. Heveriko fa tena zava-dehibe ny fanaovana izany satria tsy manova zavatra amin'ny alàlan'ny kiakiaka fotsiny ianao. Manova zavatra ianao amin'ny alàlan'ny fampisehoana amin'ny rehetra ny antony maha-tsara ny lalanao. Amin'ny lafiny maro, adihevitra momba ny hevitra izy io.
Tena manolo-tena amin'ny zavatra inoantsika izahay. Mino izahay fa ampahany lehibe amin'ny maha-izy azy ny Apple. Ary hanohy hanao izany isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Manazava ny antony nanaiky hihaona amin'i Donald Trump i Tim Cook
Kyro dia hoy izy:
“Betsaka ireo olana ireo, ary ny làlana mandroso dia ny fandraisana anjara. Raha ny tenako manokana dia mbola tsy nahita toerana nahomby aho teo amin'ny sisiny. Ny fomba fitarihanao ireo olana ireo dia ny filalaovana ny kianja filalaovana. Noho izany, na eto amin'ity firenena ity, na amin'ny Vondrona eropeana, na any Chine na any Amerika atsimo, dia manolo-tena isika. Ary manao marimaritra iraisana isika rehefa manaiky ary miady hevitra rehefa tsy mifanaraka. Heveriko fa tena zava-dehibe ny fanaovana azy satria tsy manova zavatra amin'ny alàlan'ny kiakiaka fotsiny ianao. Manova zavatra ianao amin'ny alàlan'ny fampisehoana amin'ny rehetra ny antony maha-tsara ny lalanao. Amin'ny lafiny maro, adihevitra momba ny hevitra izy io.
Tena manolo-tena amin'ny zavatra inoantsika izahay. Mino izahay fa ampahany lehibe amin'ny maha-izy azy ny Apple. Ary mbola hanohy hanao izany isika. "
Inona? Azon'ny olona atao ve ny mametraka ny tantara tany am-boalohany, azafady?
Mamaly an'i Kyro
Hanisy fiampitana lalamby amin'ny Maps ofisialy i Apple
Facebook Messenger dia mandefa antso anaty vondrona video